INHON* အာမခံဝန်ဆောင်မှုသည် နုတ်ဘွတ်များ၊ တက်ဘလက်များနှင့် ဆဲလ်ဖုန်းများအတွက် ၁ နှစ် အာမခံဖြင့်**, ၂၄-နာရီအတွင်း အမြန်ပြုပြင်ပေးသော ဝန်ဆောင်မှု**ကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ INHON တွင် သင်၏ မေးခွန်းများကို ဖြေဆိုရန် ကျွန်တော်တို့၏ ဖောက်သည် ဝန်ဆောင်မှု ကိုယ်စားလှယ်များထံ ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်သည့် ဖောက်သည်များကို ပံ့ပိုးပေးသည့် အရေးပေါ် ဖုန်းနံပါတ်လည်း ရှိပါသည်။ ပြုပြင်ရန် လိုအပ်ပါက ထိုပစ္စည်းကို ကျွန်တော်တို့၏ ဖြန့်ဖြုးရောင်းချသူ (သို့မဟုတ်) i-Smart ဆားဗစ် စင်တာထံ ကျေးဇူးပြု၍ ပေးပို့ပါ။
ဆားဗစ် စင်တာ အဆက်အသွယ် အချက်အလက်
i-Smart Co., Ltd (INHON မှ အသိအမှတ်ပြုထားသော အရောင်းနှင့် ဆားဗစ်စင်တာ)
ဖုန်း - 09-259372288
အီးမေးလ် - ismart2014.mm@gmail.com
လိပ်စာ - No.(155), Ground Floor, Seikkanthar Street(Lower), Kyauktada Township, Yangon.
ဝန်ဆောင်မှု ပေးသည့်အချိန် 09:30-18:00(စနေ၊တနင်္ဂနွေနှင့် ရုံးပိတ်ရက်များမှ လွဲ၍)
၂၄-နာရီ အမြန် ပြုပြင်ပေးခြင်း
INHON ကွန်ပျူတာကို ဝယ်ယူသူသည် အာမခံသက်တမ်းအတွင်း ၂၄-နာရီ အတွင်း အမြန် ပြုပြင်ပေးသည့် ဝန်ဆောင်မှုကို နှစ်သက်ခံစားနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
INHON ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ပတ်သတ်ပြီး တစ်စုံတစ်ရာ ပြသနာရှိပါက ဝယ်ယူပြီး ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း ပြန်လည် လဲလှယ်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် ပြုပြင်ပေးခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သည်။ ဝယ်ယူစဉ်က ရရှိခဲ့သော လက်ခံပြေစာနှင့်အတူ ဝယ်ယူသူသည် ပစ္စည်းကို လဲလှယ်ရန် သို့မဟုတ် ပြုပြင်ရန်အတွက် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသူ သို့မဟုတ် i-Smart ဆားဗစ် စင်တာထံ သွားရောက်နိုင်ပြီး ထိုအတွက် မည်သည့် ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခကိုမျှ တောင်းခံမည် မဟုတ်ပါ။ သို့သော် ထိုပစ္စည်းဝယ်ယူထားသည့် ငွေကိုမူ ပြန်အမ်းမည် မဟုတ်ပါ။
အာမခံနှင့် ပတ်သတ်သော စည်းကမ်းချက်များနှင့် အခြေအနေများ
အာမခံ သက်တမ်း -
နုတ်ဘွတ်များအတွက် အာမခံသက်တမ်းမှာ ဝယ်ယူသည့် လက်ခံပြေစာတွင် ပါရှိသော ရက်စွဲမှစ၍ ၁ နှစ်အတွင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဘတ္ထရီများအတွက် အာမခံသက်တမ်းသည် ၆ လဖြစ်ပြီး အခြား ဆက်စပ်ပစ္စည်းများမှာမူ ၃ လ ဖြစ်ပါသည်။
တက်ဘလက်များအတွက် အာမခံသက်တမ်းမှာ ဝယ်ယူသည့် လက်ခံပြေစာတွင် ပါရှိသော ရက်စွဲမှစ၍ ၁ နှစ်အတွင်း ဖြစ်ပါသည်။ USB ကြိုးနှင့် အဒက်တာအတွက် အာမခံသက်တမ်းမှာ ၃ လ ဖြစ်ပါသည်။
ဆဲလ်ဖုန်းများအတွက် အာမခံသက်တမ်းမှာ ဝယ်ယူသည့် လက်ခံပြေစာတွင် ပါရှိသော ရက်စွဲမှစ၍ ၁ နှစ်အတွင်း ဖြစ်ပါသည်။
(1) အာမခံ သက်တမ်းကို တွက်ချက်ရာတွင် ဝယ်ယူသည့် လက်ခံပြေစာ၏ ရက်စွဲ ("လက်ခံပြေစာ ရက်စွဲ") ကို အခြေခံထားပါသည်။
အာမခံသက်တမ်းကို တွက်ချက်ရန် လက်ခံပြေစာရှိ ရက်စွဲကို အသုံးပြုလျှင် ဝယ်ယူခဲ့သော ကုန်ပစ္စည်း မော်ဒယ်နှင့် ပတ်သတ်သည့် အသေးစိတ်ကို ဖော်ပြထားသော အလုံးစုံပါဝင်သည့် လက်ခံပြေစာကိုလည်း ပူးတွဲ တင်ပြသင့်ပါသည်။
(2) ပစ္စည်းကို ဖြုတ်ခြင်း သို့မဟုတ် မသင့်လျော်စွာ အသုံးပြုခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ပျက်စီးမှု/အလုပ်မလုပ်ဆောင်မှုတို့သည် အာမခံတွင် အကျုံးဝင်ခြင်း မရှိပါ။ ပစ္စည်းကို ဝယ်ယူသူ သို့မဟုတ် အခြား ခွင့်ပြုချက်မရှိသည့် အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးဦးမှ ဖြုတ်လိုက်မိလျှင် ထိုပစ္စည်းသည် အာမခံနှင့် အကျုံးဝင်ခြင်း မရှိတော့ပါ။
(3) ဝယ်ယူအသုံးပြုသူမှ စက်ရုံ၏ စီရီးနံပါတ် စတစ်ကာကို ဖယ်ရှားပစ်ခြင်း၊ စီးရီးနံပါတ် စတစ်ကာသည် ပစ္စည်း မော်ဒယ်နံပါတ်နှင့် ကိုက်ညီမှု မရှိတော့ခြင်း၊ လက်ဆော့မှု သို့မဟုတ် တိုက်စားမှုကြောင့် စီးရီးနံပါတ် စတစ်ကာကို ဖတ်ရှု၍ မရတော့ခြင်း၊ သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ INHON စီးရီးနံပါတ် စတစ်ကာ မရှိတော့ခြင်း။ အထက်ဖော်ပြပါ အခြေအနေများတွင်၊ ပေးထားသည့် အာမခံကို INHON**** မှ ပြန်လည် ရုပ်သိမ်းပါသည်။
(4) INHON သည် ၄င်း၏ ကုန်ပစ္စည်းများအတွက် ပြုပြင်ထားသော အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ပတ်သတ်ပြီး ၃-လ အာမခံ ပေးထားပါသည်။ အဆိုပါ ကာလအတွင်း အလားတူ အမှား ထပ်မံ ဖြစ်ပွားလျှင် ဝယ်ယူအသုံးပြုသူအနေဖြင့် အာမခံပေးထားသည့် ဝန်ဆောင်မှုမှ ကင်းလွတ်ပိုင်ခွင့် ရှိပါသည် (ပစ္စည်းတစ်ခုလုံးအတွက် အာမခံ သက်တမ်းကျော်လွန်ပြီး ဖြစ်လျှင် အာမခံ သက်တမ်းသည် ဦးစားပေး သတ်မှတ်ချက်အရ ဖြစ်ပါသည်။)
(5) INHON သည် ၂၄-နာရီအတွင်း အပြီး ပြုပြင်ပေးမည့် ဝန်ဆောင်မှုကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ (i-Smart မှ ပစ္စည်းကို လက်ခံရရှိသည့် အချိန်မှ စတင်သည်။ ငွေပေးချေပြီး ပြုပြင်မှုများအတွက် အကျုံးမဝင်ပါ။)
(6) အောက်ဖော်ပြပါ အခြေအနေတွင် INHON သည် အာမခံ ပေးထားသည့် INHON ပစ္စည်းများအတွက် ပြင်ဆင်ခကို တောင်းခံပိုင်ခွင့် ရှိသည် -
• INHON ကုန်ပစ္စည်း၏ အာမခံ သက်တမ်းကို အတည်မပြုနိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် INHON ကုန်ပစ္စည်းသည် အာမခံ သက်တမ်း ကုန်လွန်သွားခြင်း။
• အသုံးပြုသူ လက်စွဲစာအုပ်တွင် ဖော်ပြထားသော လမ်းညွှန်ချက်များ သို့မဟုတ် လုပ်ဆောင်ရမည့် ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေများကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု။
• လူတို့ မထိန်းချုပ်နိုင်သည့် အရာများကြောင့် ပျက်စီးရသော ကုန်ပစ္စည်း (သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်များ၊ ရေကြီးခြင်း၊ မီးလောင်ခြင်း၊ ငလျင်လှုပ်ခြင်း၊ လျှပ်စီးလက်ခြင်း၊ တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်း တိုက်ခြင်း၊ ပိုးမွှားများ၊ အစရှိသဖြင့်) သို့မဟုတ် အခြား ထူးခြားသည့် အကြောင်းအချက်များ။
• ကြားခံ-အဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက် မရှိသော သို့မဟုတ် အတည်ပြုထားခြင်း မရှိသော အစိတ်ပိုင်းများကို ခွင့်ပြုချက် မရရှိဘဲ ထည့်သွင်းမှုများ၊ ထပ်ဖြည့်မှုများ၊ ချဲ့ထွင်မှုများ၊ ပြင်ဆင်မှုများ၊ သို့မဟုတ် ပြုပြင်မှုများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ပျက်စီးမှု။
• ကုန်ပစ္စည်း၊ စနစ် ပြန်လည်ရယူမှု/ထည့်သွင်းမှု သို့မဟုတ် ဆော့ဖ်ဝဲ ထည့်သွင်းမှု ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ကိုက်ညီခြင်းမရှိသည့် ဆော့ဖ်ဝဲများ၏ ပြသနာကို အဖြေရှာခြင်း။
• လုပ်ဆောင်ချက် စနစ်ကို ပြန်လည် ဖောမတ်ချခြင်း သို့မဟုတ် ဟာ့ဒ်ဒစ်ကို ပြန်လည် ခွဲဝေချထားခြင်းကဲ့သို့ ဝယ်ယူအသုံးပြုသူမှ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ပြင်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ကွန်ပျူတာ ဗိုင်းရပ်စ် ဝင်ရောက်မှု သို့မဟုတ် ဗိုင်းရပ်စ်သတ်မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော စနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပျက်စီးမှု။
*ဤဝက်ဘ်စာမျက်နှာရှိ အာမခံ ဝန်ဆောင်မှု ဖော်ပြချက်သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရောင်းချသော INHON ကုန်ပစ္စည်းများအတွက်သာ ဖြစ်ပါသည်။ အခြားဒေသများရှိ အာမခံဝန်ဆောင်မှုအတွက် ဒေသခံ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသူထံ ကျေးဇူးပြု၍ ဆက်သွယ်ပါ သို့မဟုတ် အာမခံ ကတ်ကို ရည်ညွှန်းပါ။
** ပြင်ဆင်ချိန်သည် ကုန်ပစ္စည်းကို ပို့ဆောင်သည့် ကြာချိန် မပါဝင်ပါ။ ၄င်းသည် ပေးပို့သော ပစ္စည်းကို i-Smart မှ ပြုပြင်ရန် လက်ခံရရှိသည့် အချိန်မှ စတင်ပါသည်။